yarzartun: May 2016
Firmware backup ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်သိမ်းထား ရအောင်
အရေးကြီးတဲ့ အချက်လေး ပါဘဲ လူတိုင်း သိသင့်ပါတယ်။
Android တွေဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိတဲ့ Firmware ကျတတ်တဲ့ ပြသနာ တခုပါဘဲ Root ဖောက်ပြီး မြန်မာစာထည့်
သွင်းတဲ့ အခါမှ ဖောင့်ချိန်းတဲ့ App တွေကြောင့် Firmware ကျတတ် တာကြောင့် မြန်မာစာတွေ မပြောင်းခင်
ဖုန်းတွေကို Backup လုပ်ဘို့ လိုအပ် ပါတယ်ဗျာ။
Firmware backup ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်သိမ်းထား ရအောင် ဥပမာ rom ရှာရခက်မဲ့ ဖုန်းတစ်လုံကို ကလိတော့မယ်
ဆို မကလိခင် အရင် သူ့ရဲ့ ဖုန်း rom ကို ဆွဲသိမ်းထားလို့ ရပါတယ် အကယ်၍ သူ့ဖုန်းက logo ကနေ မတက်
တော့ဘူးဆို rom ရှာရတဲ့ တိုင်ပတ်တဲ့ ဒုက္ခမတွေ့ တော့ဘူပေါ့ ။
ဖုန်းကလိတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ software လေးပါ လိုအပ်တဲ့ သူတွေ အောက်မှာဒေါင်း
▼ usersfiles ▼ OR ▼ mediafire ▼
ကဲ ဖုန်း တစ်လုံးကို backup rom မဆွဲထုတ်ခင် အရင်ဆုံး အရေကြီးတာက အဲဒီဖုန်းရဲ့ usb driver ကို သွင်းထား
ရပါမယ် ပြီရင် ဖုန်းကို root ဖောက်ထားရ ပါမယ်။
ကဲ အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ Backup tools ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် စက်ရုပ်ပုံနဲ့ MTKdroid tools နေရာမှာ ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီရင် မိမိဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါ။
ကွန်ပျူတာက ဖုန်းကို သိသွာပြီ ဆိုရင် အောက်နားက အပြာရောင် ပြထားတဲ့ နေရာမှာ မိမိ ဖုန်းမော်ဒယ် ပေါ်
လာပါမယ် ချိတ်ဆက်မူအောင်မြင်ပြီ ဆိုရင် root backup recovery နေရာမှာနှိပ်ပါ။
ဒီပုံ အတိုင်း တက်လာပြီဆိုရင် Backup နေရာမှာနှိပ်ပါ ပြီးရင် ခဏစောင့်နေပါ။
-အောက်မှာ အစိမ်ရောင် အတန်း တက်နေပါမယ် ခဏစောင့်နေပါ copying is complete စာတန်း တက်လာပါ
က backup ဆွဲလို့ အောင်မြင်နေပါပြီ။
Packing Backup? မေးလာရင် No ဘဲဆက်နှိပ်ပေး လိုက်ပါ ကဲပြီးရင် ကိုယ်BackUp လုပ်တာ သေချာလားသိ
ချင်သေးရင် ဒါဆို ဆွဲထုတ်ထားတာသေခြာလာမသေခြာလာ ဆိုတာ To prepare blocks for flashtools နေ
ဒီပုံအတိုင်း Md5 ဖိုင်းနဲ့ ထွက်နေပါမယ်။
ဒါဆို ဖိုင်းပြန် ခွဲထုတ်ဖို့ အတွက် open နေရာမှာ နှိပ်ပေးလိုက်ပြီး ခဏစောင့်နေပါ။
ပြီရင် စောစောက ဖိုင်းဝဲ Md5 ဖိုင် ထွက်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ သွားပြန်ကြည့်ပါ ဖိုင်နဲ့ ဒီလို ဖိုင်း အသစ်ရောက်နေပါ
မယ် ဒါဆို backup လုပ်လို့ အောင်မြင်သွားပါပြီ။
နဂို ဖုန်းသို့ မဟုတ် တစ်ခြာ အမျိုးစား တူတူ ဖုန်းထဲကို ပြန် flash ချင်ရင် SPFlash tools သုံးပြီး ပြန်Flash နိုင်
ပါသည် ဒါဆို rom ရှာ ဒေါင်းရတဲ့ ဒုက္ခ ကနေ ကင်းဝေးပါပြီ။
အားလုံး အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်ဗျာ
Read more: ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: Android Firmware Backup ပြန်ဆွဲထုတ်နည်း
Posted by dawallay lay at 8:16:00 PM No comments:
Android Firmware Back Up ပြန်ဆွဲထုတ်နည်း
1.အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်လေးပါပဲ လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်
Androidတွေမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ Firmwareကျတဲ့ပြဿနာပါပဲ Rootဖောက်ပြီးမြန်မာစာထည့်သွင်းတဲ့အခါမှ Fontချိန်းတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကြောင့် Firmwareကျတက်တာကြောင့် မြန်မာစာတွေ မပြောင်းခင်ဖုန်းကိုBack upလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ် Firmware back upလုပ်ပြီးပြန်သိမ်းထားရအောင် Romရှာရခက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို ကလိတော့မယ်ွဆိုရင် အရင် သူ့ဖုန်းRomကို Back upဆွဲသိမ်းထားလို့ရပါတယ် အကယ်၍သူ့ဖုန်းက Logoကနေမတက်တော့ဘူးဆိုရင် Romရှာရခက်တဲ့ ဒုက္ခမတွေ့တော့ဘူးပေါ့ ကျနော်လို ဖုန်းတစ်လုံးကို အမြဲ ကလိတက်တဲ့သူတွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲပါ။
MTK Back up toolကို သည်မှာDownloadရယူရန်။
ဖုန်းတစ်လုံးကို Back up ဆွဲမထုတ်ခင် အရင်ဆုံးအရေးကြီးတာက Rom Back upဆွဲထုတ်မည့်ဖုန်းရဲ့ USB Driverကိုသွင်းထားရပါမယ်
အားလုံး အဆင်သင်ဖြစ်ပြီဆိုရင် စောစောကDownထားတဲ့ Back up toolကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ပီးရင် စက်ရုပ်ပုံနဲ့ MTK droid toolsကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
.ပြီးရင် မိမိဖုန်းကို Computerနဲ့ ချိပ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ Computerကဖုန်းကို သိသွားပြီဆိုရင် အောက်နားက အပြာရောင်နဲ့ပြထားတဲ့နေရာမှာ မိမိဖုန်းModelပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ချိပ်ဆက်မှုအောင်မြင်ပြီဆိုရင် rootback up recoveryနေရာကို နှိပ်ပါ။
ဒီပုံ အတိုင်းတက်လာပြီဆိုရင် Back upနေရာနှိပ်ပါ ပြီးရင် ခဏစောင့်နေပေးပါ။
အောက်မှာ အစိမ်းရောင် အတန်းနက်နေပါမယ် ခဏစောင့်နေပါ Copyin is completeစာတန်းတက်လာရင် Back upဆွဲလို့အောင်မြင်ပါပြီ
Packing Backup?မေးလာရင် Noပဲ ဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် ကိုယ်Backupလုပ်တာ သေချာလားသိချင်သေးရင်
ဒါဆို ဆွဲထုတ်ထားတာ သေချာလား မသေချာလားဆိုတာ To Prepare blocks for flashtoolsနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ဒီပုံ အတိုင်း Md5 ဖိုင်နဲ့ထွက်နေပါ့မယ်
ဒါဆိုFileကို ပြန်ခွဲထုတ်ဖို့အတွက်Openကိုနှိပ်ပေးပြီး ခဏလေးစောင့်ပေးပါ။
ပြီးရင် စောစောက Firmware Md5 file ထွက်ခဲ့တဲ့နေရှာကိုပြန်သွားကြည့်ပါ Fileနဲ့ ဒီလို Fileအသစ်ရောက်နေပါ့မယ် ဒါဆိုBackupလုပ်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ။
နဂိုဖုန်း or တခြားဖုန်းအမျိုးစားတူ ဖုန်းထဲကို ပြန်Flashချင်ရင် SP Flashtoolsသုံးပြီး ပြန်Flashနိုင်ပါသည်။ဒါဆို RomရှာDownရတဲ့ ဒုက္ခမှ ကင်းဝေးပါပြီ။
Posted by dawallay lay at 8:09:00 PM No comments:
Posted by dawallay lay at 8:08:00 PM No comments:
Samsung Galaxy Note5Marshmallow 6.0.1 Root ဖေါက်နည်း
Tuesday, May 31, 2016 ဝင်းကမ္ဘာကျော် 1 comment
Samsung Galaxy Note5SM-N9208 Model အတွက် Root ဖေါက်နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။
အောက်ပါ Model ပါ... အခြား Model တွေမှာ လုံးဝ (လုံးဝ) မစမ်းပါနဲ့။
Root ပြုလုပ်နည်းကို အောက်ပါ နံပါတ်အစဉ်အတိုင်း လုပ်ပါ...
(၁). CROM Service Apk Install > Unlock လုပ်ပါ...
(၂). N9208-Kernel (Only For N9208) ဒေါင်းယူပြီး SD Card ထဲသို့ Copy ကူးထည့်ထားပါ။
(၃). Odin 3.10.7 (Latest updated version) Zip ဖိုင်လ်ကိုဖြည်ပြီး Odin3 v3.10.7.exe ကို Run > AP မှတဆင့်...
(၄). TWRP for N9208. *.img.tar file Latest version 3.0.2.0 ကို ထည့်ပေးပါ..
(၅). Start ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
SuperSU အဆင်မပြေခဲ့ရင် SuperSU Stable 2.65 (or) Latest Beta 2.72 ကို SD Card သို့ ကူးထည့်ကာ Recovery Mode မှတဆင့် Flash ပေးပါ။
နောက်ဆုံးအဆင်မပြေမှသာလျှင် အောက်ပါ CF Auto-Root တွေနှင့် Odin မှ တဆင့် Flash ပေးပါ။
Cf-Auto-Root SM-N9208 (Android 5.1.1)
Cf-Auto-Root SM-N9208 (Android 6.0.1)
ပုံမှန်အတိုင်း ဖုန်းကပြန်မတတ်ပဲဖြစ်နေရင် N9208-Kernel (Only For N9208) ကို ဒေါင်းယူပြီး SD Card ထဲသို့ ကူးထည့်ကာ Recovery Mode > Install Zip မှတဆင့် Flash ပေးလိုက်ပါ။
Posted by dawallay lay at 8:02:00 PM No comments:
Posted by dawallay lay at 7:07:00 AM No comments:
Lollipop 5.0 နှင့်အထက် ဖုန်းများအတွက် မြန်မာထည့်ပေးမဲ့ Myanmar L v.10 (2016) Apk
Sunday, June 05, 2016 ဝင်းကမ္ဘာကျော် No comments
ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Lollipop Version 5.0 နှင့်အထက်များအတွက် မြန်မာဖောက်ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် Myanmar L v.10 (2016) Apk တွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ။
Samsung Lollipop တွေမှာ Unicode,Zawgyi ပါတဲ့အကောင်တွေ Web မှမြန်မာစာ တိုင်ပါတ်နေသေးရင် ဒါလေးနဲ့ထည့်ကြည့်ပါ... အခြားသော Lollipop တွေမှာလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။ နဂိုမူလပါရှိတဲ့ Unicode တွေပြန်ထည့်ချင်ရင် Repair Fonts ခလုတ်ကိုနဲ့ပြန်သွင်းပါ။ အဲ့ဒါက Backup လုပ်ပြီး Restore ပြန်လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး တစ်ခြားဖောင့်နဲ့သွင်းမိလို့ Facebook မှာ မြန်မာလိုနာမည်မပေါ်တာတို့ Group Name တွေမှာမြန်မာလိုနာမည်မပေါ်တာတို့ဆိုရင် အရင်ဆုံး Repair Fonts ခလုတ်နဲသွင်းပါ။ ပြီးတော့မှ အပေါ်က Install ခလုတ်နဲ့ပြန်သွင်းပါ။
Font Changer အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် မိမိဖုန်းမှာ Root ဖောက်ထားပြီးသားဖြစ်ရမည်။
Android version 5.0 နှင့် အထက်များသာ Font Changer က အလုပ်လုပ်ပါမည်။
Posted in: Android နှင့် မြန်မာ Font, Zawgyi Font
Posted by dawallay lay at 6:40:00 AM No comments:
6:40:00 AM Android နည်းပညာများ, firmware များ, Phone Hardware နည်းပညာများ 1 comment
ကိုအာကာ (Software, Hardware နည်းပညာများ
Posted by dawallay lay at 7:42:00 PM No comments: